Adobe Photoshop Elements 2019 misy miaraka amin'ny vaovao | Famoronana an-tserasera
Safidy mandeha ho azy bebe kokoa tonga amin'ny Photoshop Elements 2019
Photoshop Elements no kinova fototra amin'ny programa famolavolana ekena indrindra ary izany dia azo vidiana amin'ny vidiny tokana. Ankehitriny dia tonga ny kinova vaovao iray izay ahitana safidy automation vaovao hamonjy fotoana amin'ny asa izay azontsika ampitaina amin'izy ireo.
Adobe Sensei io, izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana vitsivitsy, izay ampidirina amin'ny Photoshop Elemen, ankoatry ny fanolorana ny kinova vaovao nanatsara ny fahombiazany izay mampitombo ny traikefan'ny mpampiasa ho azontsika amin'ity programa ity.
Miaraka amin'ny Photoshop Elements 2019 dia mandeha ho azy ny asa sasany toy ny fanafoanana ireo singa ka fandaminana rakitra mahazo teboka hafa. Azontsika atao ny misafidy ny hijerena ireo sary arakaraka ny kalitaony, ny tarehiny ary ny lohahevitr'izy ireo mba handaminana azy ireo amin'ny daty, olona ary toerana.
Izy io koa dia ao amin'ny fanontana izay ampidirina io faharanitan-tsaina artifisialy avy amin'ny Adobe Sensei io. Fanovana marani-tsaina mba hamoronana sary izay ahitsy sy loko manitsy azy, esorina ny gorodona na namboarina ny sary taloha.
Tafiditra ao koa ny Safidy de mamorona meme miaraka amina fanovana 53, famelabelarana sy collage izay mifanindran-dàlana amin'ireo programa hafa izay ananantsika amin'ny finday. Eto i Adobe dia tsy te ho tavela amin'ny fironana ankehitriny izay mamela anao hanatsara sary avy hatrany ary hamorona sary ary hitondra azy ireo any amin'ny tambajotra sosialy. Zava-dehibe ny orinasa toa an'i Adobe tsara tarehy amin'ny famolavolana sary sy ny famoronana tsy ho very maina eto.
Ireo singa Photoshop 2019 dia azo sintonina izao ao amin'ny Windows sy MacOs amin'ny vidiny 100,43 euro. Manana fanontana vaovao hafa koa izahay, tsy mitovy amin'ny fahazoan-dàlana feno, ary mitentina 82,28 euro izany. Safidy hanohizana ny fanovana sy ny fananganana sary avy amin'ny PC na MAC anay; fanampiana be dia be ho an'ny mpampiasa tsy te handany fotoana sy maniry hahazo valiny izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Safidy mandeha ho azy bebe kokoa tonga amin'ny Photoshop Elements 2019
Jesus Sequeiros Arone dia hoy izy:
Izy io dia safidy tsara indrindra ho antsika izay mampiasa ny mpamoaka sary malaza.
Valiny tamin'i Jesús Sequeiros Arone
Ny zirafy Toys R Us malaza dia miverina amin'ny marika 'rebrand'
Banksy cool: fanapotehana ho fitsipika mamorona